Online Marg | ‘जनताको आर्थिक सम्पन्नता मात्र आत्मविश्वासी राष्ट्रिय स्वाधीनता’
ईश्वरीप्रसाद पोखरेल उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,
देशभक्तिका मूल्यमान्यता स्थापना गरौँ
कुनै अमुक नेता, नेतृत्व तथा पार्टीको नीति तथा नारा देशभक्तिपूर्ण हुँदैमा देश निर्भयतासाथ सुरक्षित हुन्छ भन्न नेपालको भूगोल र आर्थिक आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्नँ । नश्वर भौतिक शरीरका बाहक नेताहरुको देशभक्तिको भाव तथा नाराले मात्र पुग्दैन । राजकीय पद्धतिबाट नै समग्र नेताहरु तथा पार्टीहरुमा राष्ट्रिय भक्तिभाव सिर्जना गर्नु तथा हुनु पर्दछ । मुलुकका कुनै पनि नेता तथा राजनीतिक पार्टीहरु विदेशीका प्रतिनिधि हुन सक्दैनुन् र इसारामा काम गर्दैनन् भन्ने विश्वास आम जनतामा उत्पन्न हुनुपर्दछ । देशभक्तिको सस्तो लोकप्रियताको राजनीतिले मात्र राष्ट्र सुरक्षित हुन सक्दैन । नेतृत्वले आफ्नो कार्यकालमा देशभक्तिका पूर्वाधारमा ध्यान दिएर देशलाई संकटमा पर्नबाट बचाउन सक्छ । तर तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने र आफूलाई सफल देखाउने अदूरदर्शी तथा स्वार्थमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वकारी शासन शैलीलाई आत्मघाती कदम मानिन्छ । यसर्थ मुलुकको हितका लागि देशको स्वाधिनता, स्वाभीमानका विषयमा कुरा गर्दा नेतृत्वले सर्वप्रथम आफ्नो पार्टी, राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा वा सरकारका आधिकारिक निकायमा राख्न पर्दछ । सबै राजनीतिक शक्तिका बीचमा आपसी गम्भीर छलफल गर्ने अवसर सबै जिम्मेवार नेताहरुले पाउनु पर्दछ । अनिमात्र देश भक्तिका मूल्यमान्यता स्थापना गर्न सकिन्छ ।
स्वाभीमानी कुटनीतिक क्षमता विकास गरौँ
विश्वका सबै देश वर्तमान समयमा कुनै न कुनै कारणले एकल भएर आफू खुशी रुपमा सञ्चालित हुन सक्दैनन् । अझ छिमेकमा भएका देशहरु बीचमा एक आपसमा निर्भर हुनैपर्ने हुन्छ । नेपाल जस्ता देश जहाँ दुईतिर विशाल मुलुक चिन र भारतसित सिमा जोडिएका छन् । दुई देशको बीचमा भएर पनि आर्थिक विपन्नता र चरम कुशासनमा मुलुक फसिरह्नु चिन्ताको विषय हो । तापनि हाम्रो देशले यी दुई छिमेकी देशको आर्थिक प्रगति र समुन्नतिबाट नेपालले फाइदा उठाउन नसक्नुको मुख्य कारण कुशासन र कुटनीतिक क्षेत्रको असफलता हो भन्ने देखिन्छ । यसर्थ जनता तथा राजनीतिक पार्टीहरुका तहबाट गैर जिम्मेवारीसाथ प्रकट हुने जुनसुकै बोलीमा लगाम लगाउन सक्नु पर्दछ । राजनीतिक पार्टी नेतृत्वले मुलुक असफलतामा किन गयो ? यो मुद्दामा आफैँ आत्मसमीक्षा गरी जनताका आक्रोस तथा गुनासाको विषपान गर्न शिर्षस्थ तयार हुन सक्नु पर्दछ । कटुसत्य अभिव्यक्तिलाई पनि कुटनीतिक तहबाट उत्तर दिइने गरी देशको स्वाभीमानीलाई कुटनीतिक रुपमा स्थापित गर्नु उचित हुन्छ । वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा सहायता र आर्थिक लेनदेनका सन्धि सम्झौँता गर्ने तहमा लोभीपापी कर्मचारीलाई अगाडि सार्ने तथा अस्थीर सरकारका मन्त्रीलाई मात्र अधिकार दिनु पनि कुटनीतिक क्षमताको विचलन हुन गएको छ । तसर्थ नेपालमा जे जति विवाद र देशलाई भुमरीमा फसाउने कुकर्म भएका छन् सबै लोभीपापी राजनीति र प्रशासनको खेलमा भइरहेको छ । तसर्थ विदेशीसंग गरिने सन्धि सम्झौता र ऋण, अनुदान आर्थिक सहयोग आदिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कानूनी आधार तयार गरिनु र त्यस अनुरुपको कुटनीतिक पहल हुनु आजको आवश्यकता भएको छ ।
अदूरदर्शिताबाट सिर्जित समस्याहरु पहिचान तथा समाधान गरौँ
निकटका छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका देशहरुसंगको राजनीतिक पार्टी तथा शासकीय, प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय सम्बन्ध दूरदर्शिताको आधारमा हुनु पर्दछ । देशभक्तिको भावनामा कुनै स्पष्ट अडान र योजना तथा अवधारणा विना मन चाहिँ गतिमा अगाडि बढ्दा मुलुक अझ समस्या र सङ्कटमा फस्न पुग्दछ । कुटनीतिक क्षमता अभावमा विदेशी सम्बन्धमा एकपछि अर्को समस्या सिर्जना हुने र समस्यामाथि समस्या नै सिर्जना हुने गरेका छन् । सत्ता, शक्ति र पदीय चाह्नाले विवेक गुमाएको अवस्थामा साना साना समूहका बीचमा आपसी समस्या हल गरी निकास निकाल्न कठिन हुन्छ भने ठूलो देश र साना देशका बीचमा कति नराम्रो असर पर्दछ होला अनुमान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रप्रतिको पदीय जिम्मेवारीको दायित्व निर्वाह गर्ने स्वदेशको मायामा स्वविवेक गुमाएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको तहबाट मुलुकमा सिर्जित कुनै पनि समस्याको उचित समाधान हुँदैन । भारत चिनसित मात्र जोडिएको राजनीतिक उल्झनका कुराहरु के के स्वार्थ र विवादमा हो सिमा नै नजोडिएको र प्रत्यक्ष रुपमा कुनै आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्ध नभएको अमेरिकासंगको सम्बन्धमा विवाद सिर्जना हुँदो छ । राजनीतिक नेतृत्व, पार्टी र तिनका पक्षधर बुद्धिजीवि वर्गको एमसिसिप्रतिको पक्ष र विपक्षको बहसले दुई देशका बीचमा निकास निकाल्नुको साटो उल्टो एकपछि अरु समस्याहरु थपिँदै जान थालेका छन् । परनिर्भरतामा मुलुक चलाउने विलासी चरित्रका नेताहरुको कारण पनि मुलुक थप सङ्कटमा फसिरहेको छ । नेपालमा विदेशी लगानीका योजना, आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा कुनै स्पष्टता हुन सकेको छैन । नेपालमा प्रशासनिक शिर्षस्थ नेतृत्वको पेसागत आचरण र कार्यक्षमताबाट मुलुक ठगिँदै आएको यथार्थ सत्य मानिन्छ । राज्यमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताका श्रृङ्खलाहरुले मुलुकको श्रमबजार, रोजगारीका क्षेत्र र सञ्चालन भएका उद्योग कलकारखाना र कृषि, पशु तथा अर्थतन्त्रका आधारहरु समाप्त हुँदै गए र पारिए । यसै कारण अविवेकी तथा अपराधी मानसिकताको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा मुलुकको समृद्धि सम्भव हुँदैन । स्वार्थ र अपराधिकै हितमा आदेश पालना गर्ने कर्मचारी समूहको जमातले देशको रक्षा गर्न सक्दैन । यसर्थ नेतृत्वको अदूरदर्शिताबाट सिर्जित समस्याहरु इमानदार भएर पहिचान गरौँ तथा पारदर्शितासाथ विवेकसम्मत समाधानका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक वातावरण निर्माण गरौँ अनि मात्र मुलुकको सुरक्षा होला ।
निस्वार्थ, इमानदार राजनीति अनि मात्र आर्थिक समृद्धता
मुलुकमा प्रजातान्त्रिक, गणतान्त्रिक तथा आवधिक चुनावी पद्धतिबाट नेतृत्व चयन हुने राजनीतिक प्रणाली विकासको अभ्यास गरिदाँे छ । मुलुकका सत्ता र प्रतिपक्षका प्राय ः सबै राजनीतिक पार्टीका प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा वार्ड तहदेखि केन्द्रीय शिर्षस्थ नेतृत्व तहसम्मको चुनावबाट नेता चुनिने अभ्यास भएको छ । तर राजनीतिक पार्टीका भेला, गोष्ठी र महाधिवेशन आदिका अभ्यासमा दुखद पक्ष के रह्यो भने, देशमा उच्च बेरोजगारी छ, लाखौँ लाख जनता कुनै सीपगत क्षमता र दक्षताविहिन अवस्थामा विदेशमा खतराजनक, जोखिमका फोहोरी र असम्मानित श्रम वा पेसामा संलग्न हुन बाध्य छन् । दैनन्दिन दुर्घटनामा परेर अङ्ग भङ्ग हुने, विभिन्न घटनामा परी बेहोस भई जीवन नै खतरामा पर्ने तथा मृत्यु भएर उमेरका युवायुवतीहरुको लासका लास स्वदेश भित्रिने गरेका पाइन्छन् । भारत जस्तो खुला सिमाको देशमा कति नेपालीहरु कुन हैसियतको रोजगारमा छन् ? भारत तथा अन्य विदेशी मुलुकका के कस्ता श्रमशक्ति तथा पेसा व्यावसायीहरु नेपालमा कार्यरत छन् ? नेपालको आर्थिक जीवनका आधार कृषि, पशु व्यवसायका क्षेत्र तथा जग्गाजमिनहरु किन बाँझा हुन पुगे ? यी विषयमा सामूहिक जवाफदेहिता को को पदाधिकारी तहमा हुन्छ ? आदि विषयमा कुनै प्रस्ताव भएनन् र छलफल नै गरिएनन् । यसैले राजनीतिक पार्टीहरुका गतिविधि, सम्मेलन र महाधिवेशनहरु निस्वार्थ, इमानदार तथा मुलुकको समृद्धिप्रतिको राजनीतिक बहसबाट धेरै टाढा छन् । यी पार्टीहरुको धेय पार्टीको नेतृत्व हत्याउने सत्ता, शक्ति र पदीय दुरुपयोग गरी आफ्नो वैयक्तिक आर्थिक समृद्धि र वर्गीय सामथ्र्यता हासिल गर्ने तहसम्मको घटियापन मा सिमित देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको आर्थिक समृद्धि, भौतिक विकास तथा राष्ट्रिय स्वाभीमान कसरी वृद्धि हुन्छ ? गम्भीर भएर सौँचौँ र मुलुकको आन्तरिक रोजगारी र स्वाभीमानको मार्गमा ध्यान देऔँ ।
प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट समृद्ध बनौँ र देशको स्वाभीमान उच्च बनाऔँ
मुलुक सबैको साझा हो । राजनीतिक पार्टीका आधारहरु ती ती विषयमा सहमत भई सामूहिकतामा आवद्ध भएका समूहहरु हुन् । ती सबै समूहलाई उपेक्षा गरेर पार्टी नेतृत्व र सरकारमा हुँदा शिर्षस्थ नेतृत्वले म नै एकल शक्ति हुँ । म नै सबै निर्णयको आधिकारिक आधार हुँ भन्ने घमण्ड शिर्षस्थ नेतृत्वमा रहेसम्म मुलुकमा प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन । तसर्थ नेताहरुले आफूभित्रको स्वार्थ, विकृति र विसङ्गति त्यागौँ । आर्थिक निर्भरतासाथ देशको कायापलट गर्ने तथा सबै क्षेत्रका जनतामा विश्वास जित्ने पारदर्शी योजना सिर्जना हुनु पर्दछ । देश र जनताले आर्थिक समृद्धता र रोजगारीका अवसर पाएमा मुलुकले कुनै पनि पक्षमा विदेशी शक्तिसंग हार्ने सवाल हुँदैन । लोभीपापी र कमजोर मानसिकताका नेतृत्वले अजिङ्गरलाई अगाडि राखेर भागुताहरुलाई सुरक्षित छौँ भनी तिमी स्वीकार गर भनिरहेछन् । सत्तापक्षमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा छेपारालेझैँ बोली फेर्ने नेपाली शिर्षस्थ राजनीतिक पार्टीहरुको द्वैध चरित्र पनि घातक छ । यही कारण शासन सत्तामा सबै राजनीतिक पार्टी तथा नेतृत्वले स्पष्ट प्रजातान्त्रिक विधि तथा खुला बहसमा विश्वास गर्न सक्नु पर्दछ । आफ्नो देशको भूगोल, अर्थतन्त्र तथा सबै पक्षको सही विश्लेषण गरी आफ्नो मानवीय जनशक्ति तथा सम्भावित सामथ्र्यताको आधारमा जनताको हरेक पक्षमा विश्वास लिएर दीगो निकासको बाटो खोज्न सबै किसिमको वैयक्तिक राजनीतिक स्वार्थ त्यागका लागि हाम्रा नेताहरु तयार नभएसम्म मुलुकको सुरक्षा र स्वाभीमान अभिवृद्धि हुन सक्दैन । निस्वार्थता र पारदर्शी सहभागिताले मात्र मुलुकलाई समृद्ध तथा सबल बनाउन सकिन्छ । यसर्थ आम जनताको रोजगारी, स्वरोजगारी, आयार्जन तथा आर्थिक समृद्धिका साथ जनअभिमतमा मात्र राष्ट्रिय एकता तथा विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रतिकार गर्न सकिन्छ । यो नै मुख्य जनपक्षीय राजनीति तथा देशभक्तिको इमानदार मापदण्ड हुन्छ । तसर्थ जिम्मेवार नेतृत्वका अभिव्यक्तिका सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावका विषयमा देशको सबै नागरिक, कार्यकर्ता सचेत हुने गरौँ र देशको स्वाभीमानको रक्षा गरौँ ।